တသိမ့်သိမ့်တငြိမ့်ငြိမ့် – Grab Love Story
အဖုံးဖွင့်ထားသော လေးထောင့်သံပုံး၏ အ၀တွင် သစ်သားတုတ် ကန့်လန့်ခံကာ ချိတ်ဖြင့် ချိတ်..တံပိုးဖြင့် ထမ်းလာခဲ့သော ရေအပြည့်ပါသည့် သံပုံးနှစ်ပုံးကို ရင်မောင်သည် သူ၏ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အသာထိန်းပြီး ဒူးနှစ်ဖက်ကွေးကာ မြေပေါ်ကို ချလိုက်၏ ။ ပြီးတော့ ပုံးနှစ်ပုံးတွင် ချိတ်ထားတဲ့ ချိတ်နှစ်ချိတ်ကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး သူ၏ ပုခုံးပေါ်မှ တံပိုးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ယူပြီး အနီးရှိ အုန်းပင်မြစ်အုံကြီးတွင် မှီကာ ထောင်လို့ ထားလိုက်၏ ။ပြီးတော့ ရေအပြဘ့်ပါလာသော သံပုံးနှစ်ပုံး အတွင်းမှ ရေများကို ရင်မောင်သည် တပုံးချင်းမပြီး အနီးရှိ ဒီဇယ်ပေပါကို ထက်ပိုင်း ဖြတ်ထားသော စည်ပိုင်းဖြတ် အတွင်းသို့ လောင်းပြီး ထည့်လိုက်၏ ။ ရင်မောင် ထမ်းလာသော သံပုံးနှစ်ပုံးအတွင်းမှ ရေများ ကုန်သောအခါတွင် စည်ပိုင်းပြတ်အတွင်းတွင် ရေများ ပြည့်သွားတော့သည် ။ ရင်မောင်သည် သူ၏ ခါးတွင် ၀တ်ထားသော ပုဆိုးကို ဖြန့်လိုက်ပြီး မျက်နှာပေါ်မှ ချွေးများကို သုတ်လိုက်၏ ။ ပြီးတော့ သူ၏ ပုဆိုးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တချက် နှစ်ချက်လောက် ဖြန့်ပြီးမှ ခါးတွင် ပြန်ပြီး ခပ်တိုတို ၀တ်လိုက်၏ ။ ” သန်းနုရေ ..ဒီမှာ ရေပြည့်ပြီ ..ရေချိုးလို့ ရပြီဟ …” ရင်မောင်က သွပ်မိုး ၀ါးထရံကာ ပျဉ်ခင်း သုံးပင် နှစ်ခန်း ပတ်လည် အိမ်လေးအတွင်းသို့ ငုံ့ပြီး အသံခပ်ကျယ်ကျယ်လေးဖြင့် ပြောလိုက်၏ ။ ” လာပြီ..အကိုရေ..လာပြီ …” အိမ်အတွင်းမှ ထမိန်လေးကို ရင်လျားလျက် လက်အတွင်းမှလည်း ထမိန်တထည်ကို ခေါက်လျက်သားလေး ကိုင်ပြီး သန်းနုသည် ကဗျာကရာ ထွက်လာသည် ။ သန်းနုသည် သံစည်ပိုင်းအနား ရောက်သည်နှင့် အနီးရှိ သရက်ပင်ပျိုလေး၏ ခြေရင်းနားရှိ ကိုင်းတက်ခွလေးတွင် သူမ၏ လက်အတွင်းမှာ ကိုင်လာသော ထမိန်ခေါက်လေးကို တင်လိူက်၏ ။ အနီးသို့ သန်းနု ရောက်လာသည်နှင့် အုန်းပင်ကြီး၏ မြစ်ဆုံတွင် ထောင်မှီထားသော သူ၏ တံပိုးကို လှမ်းယူပြီး ရင်မောင်သည် သန်းနုကို ကြည့်လို့နေ၏ ။ သူမ ရင်လျားကာ ၀တ်ထားသည့် ထမိန်လေးမှာ သူမ၏ မို့မောက်နေသော ရင်သားများနှင့် ကားစွင့်ပြီး ကြီးမားအိစက်နေသော တင်သားများကို ပြီးပြည့်စုံအောင် လုံခြုံ မှု မပေးနိုင်ခြေ ။
ဖြူ ပြီး ၀င်း နေသော အသားအရည်လေးများဖြင့် သူမ၏ အမို့အမောက် အစွင့်အကားများကို ပေါင်းစပ်လိုက်သော အခါတွင် သူမ၏ ခပ်မြင့်မြင့် အရပ်ကလေးဖြင့် သန်းနုမှာ လှချင်တိုင်း လှလို့ နေ၏ ။ ” သန်းနု..ချိုးတော့လေ ..တော်ကြာ အအေးပတ် အုံးမယ်…” ” အကို ခပ်ပေးတဲ့ ရေကို ချိုးရမှာ အားနာနေလို့ပါ ..သန်းနုဘာသာ ချောင်းထဲ ဆင်းချိုးလဲ ရတာဘဲ ဟာကို…” ” ခုတလော ရေတွေ ငံတယ်ဟ …ဒါကြောင့် ငါက ကန်ရေကို ခပ်ပေးတာ ..ဒေါ်လေးပါ ချိုးရ သုံးရ မှာ ဆိုတော့ ငါလည်း ကုသိုလ်ရတာပေါ့ဟာ ..အော်..ဒေါ်လေးကို မမြင်ပါလား..” ” စက်အိမ်ကြီးက ဘဘကြီးတို့ ရောက်နေလို့ စောစောက ခေါ်ခိုင်းတာနဲ့ အမေ လိုက်သွားတယ်လေ ..” ” ကဲ ..ချိုး..ချိုး …မိုးချုပ်သွားအုံးမယ်…” ” ဟင်း….အကိုက သန်းနုကိုသာ ရေချိုးခိုင်းနေတာ..အကိုက မသွားသေးတော့..သန်းနုက ဘယ်လို ချိုးရမှာလဲ…” ” အော်..အေး..ဟုတ်သားဘဲ…ကဲ..သွားပြီ..သန်းနုရေ ..” တံပိုးနှင့် ရေပုံးနှစ်ပုံးကို ကိုင်ကာ ထွက်သွားသော ရင်မောင်၏ ကျောပြင်ကျယ်ကြီးကို ငေးကာ ကြည့်ရင်း သန်းနု တချက် ပြုံးလိုက်၏ ။ ” အော်..ရိုးလိုက်တဲ့ အကိုရယ် …” ဒါကြောင့်လည်း သန်းနုက အကို့ကို ခင်ရတာ…အင်း..ခင်တာ မဟုတ်ဘူး..ချစ်တာပါ …။ သန်းနုသည် သူမ အတွေးဖြင့် သူမ ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးလိုက်၏ ။ သန်းနု၏ ပါးပြင်လေး နှစ်ဖက်တွင် ပန်းနုရောင်လေးတောင် သန်းလို့ သွားရ၏ ။ သန်းနုသည် သူမ၏ အတွေးစလေးကို ရှက်စနိုးလေး ဖြတ်လိုက်ပြီး ရေဖလားလေးကို ကောက်ကိုင်ကာ စည်ပိုင်းပြတ်အတွင်းမှ ရေကို ခပ်ကာ မျက်နှာ သစ်လိုက်သည် ။ ပြီးတော့ တခွက်ချင်း ခပ်ပြီး ချိုးနေတော့၏ ။ ရင်မောင်နှင့် သန်းနုတို့သည် ဓနရှိန် ဆန်စက်ဝန်းကြီး အတွင်းတွင် အတးနေထိုင်ကြသည့်သူများ ဖြစ်ကြပြီး ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းများလည်း ဖြစ်ကြသည် ။ ရင်မောင်မှာ အသက် ၂၀ ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး အဝေးသင် တက်နေ၏ ။ သန်းနုကတော့ ရှစ်တန်းနှင့်ပင် ကျောင်းထွက်ခဲ့ရပြီး စက်ထဲတွင် စပါးသယ် တာလီမှတ် စသဖြင့် အလုပ်များ လုပ်နေခဲ့ရ၏ ။ ရင်မောင်နှင့် သန်းနုတို့၏ မိဘများ လက်ထက်ကထဲက ဓနရှိန် ဆန်စက်ကြီး၏ အလုပ်သမားများ ဖြစ်ခဲ့ကြ၏ ။ သန်းနု ရှစ်တန်း ရောက်သော နှစ်တွင် သန်းနု၏ အဖေ မှာ စက်ညပ်လို့ ခြေတဖက် ဖြတ်ပစ်ခဲ့ရပြီး စိတ်ထောင်းတော့ ကိုယ်ကြေ ဆိုတာမျိုးလို ဖြစ်ပြီး အရက်စွဲကာ နောက်ဆုံးတော့ သေဆုံးသွားခဲ့သည် ။ သန်းနုတို့ သားအမိ နှစ်ယောက်သာ လောကကြီး အလည်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့ကြတော့သည် ။ ရင်မောင်သည်လည်း သန်းနုနှင့် ဘာမှ မထူးပါ ။ ရင်မောင်၏ အဖေသည်လည်း စပါးထမ်းသည့် အလုပ်သမားများကို ကြီးကြပ်ရင်း ကုန်းဘောင် ( ရေယာဉ်နှင့် ပြေကမ်းပါးရှိ တံတားတို့ကို ဆက်သွယ်ဖို့ အရှက်ခင်းကာ တင်ထားသည့် ပျဉ်ပြားကြီးများ ) ပေါ်မှ ပြုတ်ကျကာ ရေထဲက ငုတ်ဖြင့် ဆောင့်ပြီး ရင်မောင် ဆယ်တန်း အောင်ပြီးသော နှစ်တွင်ပင် ကွယ်လွန် ခဲ့ရ၏ ။ ရင်မောင်၏ အဖေ..သန်းနု၏ အဖေ နှင့် စက်ပိုင်ရှင် ဘဘကြီးတို့မှာ ဒီ ဓနရှိန် စက်ဝန်းကြီးအတွင်းတွင်ပင် အတူနေထိုင် ကြီးပြင်းခဲ့ကြသော ငယ်သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြသည့် အားလျှော်စွာ ရင်မောင်၏ အဖေ နှင့် သန်းနု၏ အဖေတို့ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြပြီး နောက်တွင် ကျန်ရစ်သော မိသားစုများကို စက်ပိုင်ရှင် ဘဘကြီး က ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ကာ ထားခဲ့၏ ။ ရင်မောင်၏ မိခင်မှာ ရင်မောင် လေး ငါးနှစ်သား လောက်ကပင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်လေရာ ရင်မောင်၏ ဖခင် ကွယ်လွန် ပြီးသွားသော အခါတွင် ရင်မောင်မှာ လောကကြီး မှာ သူ တဦးတည်းသာ ကျန်ရစ်လေတော့သည် ။
ရင်မောင်ကို စက်ပိုင်ရှင် ဘဘကြီးက သူ၏ စက်အိမ်ကြီး နောက်ဖက်တွင် ရှိသော အခန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်စေခဲ့ပြီး ဆယ်တန်း အောင်မြင်ပြီး ဖြစ်သော ရင်မောင်ကို စက်ထဲတွင် စာရေး အလုပ် ပေးခဲ့၏ ။ ရင်မောင်၏ ပညာသင် စားရိတ်ကိုလည်း ထောက်ပံ့၏ ။ စက်ပိုင်ရှင် ဘဘကြီးသည် ရင်မောင်ကို တခါတရံတွင် ဘဘကြီးတို့ ရန်ကုန် ပြန်ရာတွင်လည်း ခေါ်ကာ သွားတတ်သည် ။ ရင်မောင် ဘွဲ့ရလျှင် စက်ပိုင်ရှင်ဘဘကြီးက ရန်ကုန်တွင် အလုပ်ပေးပြီး ခေါ်ထားမည် ဟုလည်း စက်ဝန်းတခုလုံးက သိကြသည် ။ စက်ပိုင်ရှင်ဘဘကြီးတို့တွင် မိုးမြင့်ရှိန် ဟူသော သားတယောက်သာ ရှိ၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန်မှာ ရင်မောင်..သန်းနုတို့နှင့် ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်၏ ။ သို့ရာတွင် မိုးမြင့်ရှိန်မှာ ကိုးတန်းကို သုံးနှစ်ကျပြီး ကျောင်းမှ ထွက်ခဲ့ရသူ ဖြစ်၏ ။ တဦးတည်းသော သား ဖြစ်ပြီး မိဘများက အလိုလိုက်လွန်းတာကြောင့် မိုးမြင့်ရှိန်မှာ ထင်ရာစိုးင်းနေသော လူငယ်တယောက် ဖြစ်၏ ။ ဓနရှိန်ဆန်စက်ကြီးသည် နယ်မြို့လေးတမြို့၏ ဆင်ခြေဖုံး ချောင်းကမ်းပါးပေါ်တွင် တည်ရှိ၏ ။ စက်ပိုင်ရှင် ဘဘကြီးမှာ ရန်ကုန်တွင်သာ အနေများသည် ။ ရန်ကုန်တွင် အခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများရှိပြီး စက်သို့ လာသော အခါတွင် ရန်ကုန်နှင့် နေ့ချင်းပြန် ကားလမ်းပေါက်လျှက် ရှိသော ဆန်စက်ကြီးမှာ ( ၃ )ရက်ထက် ဘဘကြီး သည် ပိုပြီး မနေပါ ။ စက်ပိုင်ရှင် ဘဘကြီးတို့ လင်မယား ပြန်သွားလျင် ဘဘကြီး၏ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ ကိုယ်စားလှယ်ကြီး ဖြစ်သည့် အသက် ( ၄၅)နှစ်ခန့် ရှိသော ဦးမြင့်မူသည် ဆန်စက်ကို အုပ်ချုပ်စီမံ ခန့်ခွဲလုပ်ကိုင်ရန် ကျန်ရစ်ခဲ့၏ ။ ဦးမြင့်မူမှာလည်း သူ၏ မိသားစုများမှာ ရန်ကုန်တွင် ရှိပြီး တခါတရံမှသာ လာတတ်၏ ။ ဦးမြင့်မူကတော့ ဆန်စက်မှ တဖ၀ါးမှ မခွာ ။ ရန်ကုန်ရှိ သူ၏ မိသားစုထံ ပြန်ခဲ၏ ။ ဦးမြင့်မူက စက်အိမ်ကြီးမှာ နေ၏ ။ စက်သူဌေးဘဘကြီး၏ တဦးတည်းသော သားဖြစ်သူ မိုးမြင့်ရှိန်ကလည်း ဦးမြင့်မူကဲ့သို့ပင် မိသားစု ရှိရာ ရန်ကုန်သို့ လိုက်မသွားဘဲ မိဘများ မျက်ကွယ် ဖြစ်သည့် ဆန်စက်တွင်သာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေခဲ့၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန်သည် ဓနရှိန် ဆန်စက်ဝန်း အတွင်းတွင် ဆောက်လုပ်ထားသော နှစ်ဆောင်ပြိုင် စက်အိမ်ကြီးတွင်ပင် ဦးမြင့်မူနှင့်အတူ နေထိုင်၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန်မှာ သူ၏ ဖခင်နှင့် မိခင်တို့ ဆန်စက်သို့ လာရောက်ခြင်း မရှိသည့်နေ့ရက်များတွင် အရက်လေး တမြမြနှင့် ထင်ရာစိုင်းနေတတ်၏ ။ ဦးမြင့်မူကလည်း မိုးမြင့်ရှိန်ကို မပြောရဲ မဆိုရဲ ။
မိုးမြင့်ရှိန်မှာ စက်ပိုင်ရှင် သူဌေးကြီး၏ သား ဖြစ်နေသည့်အပြင် ဦးမြင့်မူမှာလည်း စက်သူဌေးကြီး မလာသည့်နေံရက်များတွင် ဆန်စက်မှာ ထင်ရာစိုင်းနေတတ်သူ ဖြစ်လို့ပါ ..။ ဆန်စက်လုပ်ငန်းသည် အလုပ်သမား အများအပြားဖြင့် လုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး စပါးသယ် ဆန်အိတ်ထမ်း အလုပ်သမ မိန်းကလေးများ ကလည်း ဆန်စက်တွင် အများအပြား ရှိနေ၏ ။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ဆိုတာမျိုးလို ထမင်းနပ်မှန်အောင် ကြုံးရုန်းပြီး အပင်ပန်းခံ အလုပ်လုပ်နေသူ မိန်းကလေးများ ရှိနေသကဲ့သို့ စပါးကုန်သည် ဆန်ကုန်သည် ဆန်ပွဲစား စပါးပွဲစားများနှင့် အလျဉ်းသင့်သလို ကြည့်ပေါင်းပြီး ၀မ်းဆက်ဖို့ရအောင် ရှာနေသူ မိန်းကလေးများလည်း ရှိနေ၏ ။ ဦးမြင့်မူနှင့် မိုးမြင့်ရှိန်တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ ဘယ် မိန်းကလေးကိုမှ ချမ်းသာ မပေးပါ ။ သူတို့၏ အရှိန်အ၀ါကို သုံးပြီး လစ်ရင် လစ်သလို ဆွဲစားတတ်၏ ။ ဆန်စက်ရှိ စပါးသယ်..ဆန်သယ် မိန်းကလေးတွေထဲက တစ်တစ်ရစ်ရစ် ချစ်စရာလေးတွေဆို ဦးမြင့်မူနှင့် မိုးမြင့်ရှိန်တို့က အလွတ် ပေးခဲ၏ ။ ဒီနေရာတွင်တော့ ရင်မောင်က သူတို့နှင့် ဆန့်ကင်ျဖက် ဖြစ်၏ ။ ရိုးသား၏ ။ ကြိုးစယး၏ ။ နောက်ပြီး ဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဘဘကြီးကလည်း ယုံကြည်စိတ်ချပြီး မြှောက်စား ထားသဖြင့် ဦးမြင့်မူနှင့် မိုးမြင့်ရှိန်တို့က ရင်မောင်ကို နဲနဲ ရှိန်၏ ။ သူတို့ဂွင်များကို ရင်မောင်ကို ရှောင်ပြီး လှုပ်ရှားကြရ၏ ။ ရင်မောင်ကိုလည်း သူတို့နှစ်ဦးက တချက်လေးမှ ကြည့်လို့ မရ ။ ဒါပေမယ့် သွားပြီး မထိရဲ ။ ရင်မောင်ကို ထိလျှင် စက်ပိုင်ရှင် ဘဘကြီး ဦးထွန်းရှိန်နှင့် ရင်ဆိုင်ကြရပေ မည် ။ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ဆန်စက်ထဲတွင် အလုပ်ဆင်းနေသော မိန်းကလေး မြောက်များစွာထဲတွင် သန်းနုသည် အချောဆုံး အလှဆုံး ဖြစ်၏ ။ သန်းနုကို ကြည့်ပြီး မိုးမြင့်ရှိန်က အံတကြိတ်ကြိတ် ဖြင့် ဖြစ် နေသလို ဦးမြင့်မူကလည်း သန်းနုကို ကြည့်ကာ မိုးမြင့်ရှိန် မသိအောင် အံတကြိတ်ကြိတ် ဖြစ်နေ၏ ။ သို့ရာတွင် သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံးက သန်းနုကို မထိရဲပါ ။ သူမသည် ရင်မောင်နှင့် သမီးရည်းစား ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေကြသည်ကို ဆန်စက်တ၀န်းလုံး တခုလုံးက သိထားကြသလို ဦးမြင့်မူ နှင့် မိုးမြင့်ရှိန်တို့ နှစ်ယောက်ကလဲ သိထားကြ၏ ။ ထို့အပြင် သန်းနုသည်လည်း စက်ပိုင်ရှင် သူဌေးကြီး၏ အရေးပေးထားသော သူ တဆယာက်လည်း ဖြစ်နေလို့ သူတို့နှစ်ယောက် သန်းနု ကို မထိရဲ ..။
အံတကြိတ်ကြိတ် ဖြင့်သာ ကြည့်ရင်း အလစ်ကို စောင့်နေကြ၏ ။ ရေချိုးလို့ ပြီးသွားသော သန်းနုက သူမ၏ ခါးလေးကို ကုန်းပြီး ရင်လျားထားသော ထမိန်လေး၏ အောက်နားစလေးကို ပေါင်လည် မရောက်တရောက် လောက်အထိ တင်ကာ ရှေ့သို့ လုံးကာ ယူလိုက်ပြီး သူမ၏ လက်လေး နှစ်ဖက်ဖြင့် ရေညှစ်လိုက်၏ ။ ထမိန် အောက်နားကို သူမ၏ ပေါင်လည် လောက်အထိ လိပ်ကာ တင်ထားသဖြင့် ဖြူဖွေး တုတ်ခဲ တောင့်တင်းလှသော သူမ၏ ပေါင်သားကြီး နှစ်လုံးမှာ တပ်မက်ဖွယ် ဖြစ်နေ၏ ။ သူမသည် ခါးကုန်းပြီး ထမိန် အောက်နားစ ကို ရေညှစ်နေသည် ဖြစ်လို့ သူမ၏ တင်သား လုံးလုံးတစ်တစ်ကြီးများမှာ ရေတွေ ရွှဲရွှဲ စိုနေသော ရေလဲထမိန်ပါးလေးတွင် အတိုင်းသားကပ်လျှက် ခါးကုန်းထားသဖြင့် ပိုလို့ ကားစွင့် အိစက်ကာ မက်မောဖွယ် ကောင်းလှ၏ ။ မို့မောက် ၀င်းဝါချက် ရှိနေသော သန်းနု၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာ ရင်လျားထားသော ထမိန်လေး အတွင်းမှပြည့်အန်ကာ ထွက်နေတော့၏ ။ သူမ၏ ဘေးဖက်တွင် ရှေ့ဖက် ခပ်စောင်းစောင်း နေရာလေးမှာမတ်တပ်ရပ်ကာ သူမကို ကြည့်နေမိသော မိုးမြင့်ရှိန် သည် တံတွေး တချက် မြိုချကာ အံတချက် ကြိတ်လိုက်၏ ။ သန်းနုသည် သူမ၏ ရင်လျားထားသော ရေလဲ ထမိန်လေး၏ အောက်နားစကို ရေညှစ်ပြီးသည်နှင့် သူမ၏ လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကို သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေး ဘေးတဖက်တချက် ဆီသို့ ချကာ နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်လောက် သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ရေခါလိုက်ရာ သန်းနု၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ တသိမ့်သိမ့်ခါ သွားရသည့် နည်းတူ သူမ၏ တင်သားကြီးများနှင့် နို့ကြီးများမှာလည်း သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေး ငြိမ်သွားရသည့် တိုင်အောင် မငြိမ်သေးဘဲ တချက်နှစ်ချက်မျှ တုန်ကာ နေသေး၏ ။ သူမနှင့် ဆယ်ပေ အကွာအဝေး မျှသာ ရှိသော ဇီဇ၀ါ ခြုံလေး၏ တဖက်မှ မတ်တပ်ရပ်ကာ ကြည့်နေသော မိုးမြင့်ဂှိန်၏ ပေါင်နှစ်လုံး ကြားရှိ လီးကြီးမှာ သန်းနုကို ကြည့်နေလျက်မှ မာတောင်လာခဲ့ရုံ တင် မက တဆတ်ဆတ်ပင် ဖြစ်လို့ လာရတော့သည် ။ သန်းနုသည် သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ရေခါပြီးသည်နှင့် ရေစည်ဘေးရှိ သရက်ပင်လေး ခြေရင်းနားရှိ ကိုင်းတက်ကလေး ကြားတွင် တင်ကာထားသော သူမ၏ ထမိန်လေးကို လှမ်းယူကာ လဲပြီး ၀တ်လိုက်၏ ။
ပန်းခြုံတဖက်ရှိ မိုးမြင့်ရှိန်သည် အသာအယာပင် ထွက်လို့ လာခဲ့ပြီး သန်းနု ရှိရာနေရာနှင့် ၀ါးနှစ်ရိုက်လောက် လွန်လာသော နေရာကျမှ ပြင်းထန် ကျယ်လောင်သော တောက်တချက်ကို ခေါက်လိုက်ပြီး ” ထွီ” ကနဲနေအောင် တံတွေး တချက်ကို ထွေးလိုက်သည် ။ ထို့နောက် မိုးမြင့်ရှိန်သည် တင်းမာသော မျက်နှာထားနှင့် ဆက် လျှောက်သွားသည် ။ ဒီနေ့ စက်သူဌေးကြီး ဦးထွန်းရှိန်နှင့် ဇနီးတို့ နေ့လည်တွင် ရန်ကုန်သို့ ပြန်ကြမည် ဖြစ်သည် ။ သန်းနု၏ အမေကို တရားစခန်း ( ၁၀ ) ရက်စခန်း ၀င်ရန် ရန်ကုန်သို့ ခေါ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ရင်မောင်ကိုလည်း ဆန်စက်အတွက် စက်ပစ္စည်း အချို့ ၀ယ်ရန် သူဌေးကြီးက ရန်ကုန်သို့ ခေါ်သွား၏ ။ ရင်မောင်ကတော့ ညနေ ( ၆ )နာရီလောက် ပြန်ရောက်မည် ။ သန်းနုနှင့် အဖေါ်နေရန်အတွက် ကူလီခေါင်း သာစိန်၏ မိန်းမ ခင်လှကို သန်းနုနှင့် သွားအိပ်ရန်နှင့် သားသမီး မရှိသော ကူလီခေါင်း သာစိန်တို့ လင်မယားကို ဇနီးဖြစ်သူ ခင်လှက သန်းနု၏ အမေ ပြန်မရောက်မချင်း သန်းနုနှင့် အတူနေပြီး ချက်ပြုတ်စားရန်နှင့် သာစိန်ကတော့ စက်အိမ်ကြီးတွင်ပင် ဦးမြင့်မူ ..မိုးမြင့်ရှိန် ..ရင်မောင်တို့နှင့် အတူ လာစားရန် သူဌေးကြီး ဦးထွန်းရှိန်က စီစဉ်ပေးခဲ့၏ ။ သန်းနုကိုလည်း မုံ့ဖိုးပေးခဲ့၏ ။ စက်သူဌေးကြီး ဦးထွန်းရှိန်တို့သည် မနက်စာ စားပြီး နေ့လည် ၁၂နာရီ လောက်တွင် ရန်ကုန်သို့ ပြန်သွားကြသည်နှင့် ( ၃ )ရက်လောက် အောင့်နေကြရသော ဦးမြင့်မူ နှင့် မိုးမြင့်ရှိန်တို့သည် အရက်ဝိုင်း စကြတော့၏ ။ သူတို့ နှစ်ယောက်သည် နေ့စဉ် ဆိုသလို အမြမဲပင် သောက်နေကျ ဖြစ်သည် ။ အရက်ဝိုင်းလေး အရှိန်ရလာသည်နှင့် အရက်မူးတော့ ကျွဲခိုးပေါ် ဆိုတာမျိုးလို မိုးမြင့်ရှိန်သည် သူ၏ ရင်တွင်းမှ သန်းနုနှင့် ပတ်သက်သော ခံစားချက်တို့ကို ပွင့်အန် ထွက်လာတော့၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန် ထံမှ စကားများ ကြားရကာစက သန်းနုကို အလစ်ချောင်းနေသော ဦးမြင့်မူ၏ စိတ်ထဲတွင် တင်းကနဲ ဖြစ်သွားခဲ့ရသော်လည်း အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သော မဟုတ်တာ လုပ်တာကို အသားကျနေပြီ ဖြစ်သော ဦးမြင့်မူက အိနြေ္ဒ မပိက် ငါးခူပြုံးလေးဖြင့် မိုးမြင့်ရှိန်၏ စကားများကို နားထောင်ပေး၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန် စကားများ အရ အကွက်ဝင် လာပြီ ဖြစ်သော နေရာများတွင်လည်း ဦးမြင့်မူ က စကား ၀င်ထောက်ကာ မြှောက်ပေးလိုက်သေး၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန်၏ နုတ်ဖျားက ပွင့်အန်လာသော စကားသံများ ရပ်စဲသွားသည်နှင့် ဦးမြင့်မူသည် အားကိုးဖွယ်ရာ ကောင်းလောက်အောင် သူ၏ ဟန်ပန် ပုံစံကို ပြောင်းပြီး ထိုင်ရာက ထလိုက်၏ ။ ပြီးတော့ သူ၏ လက်တဖက်နှင့် မိုးမြင့်ရှိန် ၏ ပုခုံး တဖက်ကို ခပ်သာသာလေး ကိုင်လိုက်၏ ။ ” မင်းရဲ့ စကားတွေ ဦးလေး ကြားရတော့ ဦးလေး စိတ်မကောင်းပါဘူး..မောင်မိုးရာ…ဒီစက်မှာ သူဌေးကြီးရဲ့ တဦးတည်းသော သားက ဟိုဟာ မလုပ်ရဲ ဒီဟာ မလုပ်ရဲနဲ့ ကြောက်လန့်နေရတာလဲ ဦးလေး မင်းဖက်က မခံချင်ဘူးကွာ…” ” ဒါပေမယ့် ကျနော်က ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ..ဦးလေးရ…” ” အေးကွာ..မင်းနဲ့ ဦးလေးနဲ့ ဆိုတာက သွေးမတော်လို့သာ ဆွေမျိုး မတော်ကြတာပါ ..တကယ်တော့ မင်းနဲ့ ဦးဟာ သူငယ်ချင်းဆိုလည်း ဟုတ်တယ်…ညီအကိုဆိုလည်း ဟုတ်တယ် ..ဒီလို သံယောဇဉ် နဲ့ နေလာကြတာ မဟုတ်လား …” ” ဟုတ်ပါတယ် ဦးလေးရယ် ..ကျနော်က ဦးလေးကို ကိုယ့်ဦးလေး အရင်းလိုဘဲ သဘောထားတာပါ ..” စောစောက ပြုံး ပြုံး ပြုံး ပြုံး အားတက်သရော ပြောနေသော ဦးမြင့်မူ၏ မျက်နှာသည် မိုးမြင့်ရှိန်၏ စကား ဆုံးသည်နှင့် ချက်ချင်း ဆိုသလိုပင် တည်ကာ သွားသည် ။
ပြီးတော့ တဖြေးဖြေး အိုကာသွားပြီး မျက်မှောင်လေးပင် ထပ်လို့ ကြုံ့ကာ သူတို့နှစ်ယောက် ရှိနေကြသော စက်အိမ်ကြီး အပေါ်ထပ် လသာဆောင်မှနေပြီး ဦးမြင့်မူသည် အဝေးသို့ လှမ်းကြည့်လိုက်၏ ။ ပြီးတော့မှ သူ၏ နုတ်ဖျားမှ စကားတို့သည် တလုံးချင်း ထွက်ပေါ်ကာ လာတော့၏ ။ ” ဦး မင်း ကို ကူ ညီ ပါ့ မယ် …” ” ၀မ်းသာလိုက်တာ ဦးလေးရယ်..ကျနော်က နောက်ကြောင်း ကိစ္စဘဲ လန့်တာပါ …” ” ဒါတွေ အတွက် ဘာမှ မပူနေပါနဲ့တော့ကွာ ..ဦးလေး စီစဉ်ရင် အားလုံး အဆင်ပြေ သွားရမှာပေါ့ကွာ..အင်း..ဒါပေမယ့်…” ဦးမြင့်မူက သူ၏ ဟကားကို ရပ်ကာ အိုမင်း ညိုမှောင်လို့ နေသော မျက်နှာထားကို လုပ်လျက် အဝေးသို့ လှမ်းကာ ကြည့်နေပြန်၏ ။ ” ဒါ….ဒါပေမယ့်..ဘာဖြစ်လဲ..ဦးလေး . . ” ” ဦးလေး မှာလည်း စိတ်မအား လူမအားနဲ့ အခက်အခဲ အကျဉ်းအကြပ် တခုက ရှိနေတယ်ကွာ…” ” ဘယ်လို အခက်အခဲလဲ ဦးလေး ..ကျနော် ကူညီလို့ရရင် ကူညီမယ်လေ ..” ” ဦးလေးလဲ မင်းကိုဘဲ အားကိုးတကြီးနဲ့ အကူအညီ တောင်းမလို့ပါကွာ…” ချက်ချင်းပင် ဦးမြင့်မူ၏ မျက်နှာမှာ အားတက်သရော ဖြစ်သွားခဲ့ရာမှ တဖန် ချက်ချင်း ဆိုသလို ပြန်ပြီး အိုစာညှိုး သွားပြန်သည် ။ ပြီးတော့မှ စကားကို ပြန်ဆက်၏ ။ ” ဦးလေး အကူအညီတောင်းဖို့ ရှိခဲ့ပေမယ့် အခု မင်းရဲ့ ကိစ္စကို ဦးလေး ကူညီမယ်လို့ ဂတိပေးပြီးမှ ဦးလေးရဲ့ အခက်အခဲကို မင်းကို အကူအညီတောင်းမယ် ဆိုရင် အပေးအယူ သဘောမျိုးများ ….” ” ဟာ..ဦးလေးကလည်း ဗျာ . .ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး …ကိုယ့်လူ အရင်းအချာလို ကျနော့်ကို သဘောထားပါဗျာ ..တစိမ်းဆန်ဆန် သဘောမထားပါနဲ့ ..ပြောစရာ ရှိတာသာ ပြောပါ ..ဦးလေးရာ…” ” ကဲယယမင်းက ပြောဆိုတော့လည်း ဦးလေးက ပြောရတာပေါ့ ..ဒီလိုကွာ ..ဦးလေးဟာ မင်းတို့ မိသားစု အတွက် မင်းအဖေရဲ့ ကိုယ်စား ဒီ ဆန်စက်ကြီးကို စီမံခန်ံခွဲပြီး လုပ်ပေးခဲ့တာ မင်းတို့ ငယ်ငယ်ထဲကဘဲနော်…” ” ဟုတ်ပါတယ်..ဦးလေး…” ” အေး..ဒီ ကာလတွေမှာ ဒီ ဆန်စက်လုပ်ငန်း အဆင်ပြေဖို့ ဘွိုင်လာကိစ္စတို့ ဌာနကိစ္စတို့ အ၀ယ်ဒိုင်ကိစ္စတို့ နောက်ပြီး ရပ်ရေးရွာရေးက အစ အားလုံးမှာ ဦးလေးက အဆင်ပြေအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ အယ် ဖေါ်လို့ မရတဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်တွေ ရှိလာခဲ့တယ်ကွာ…” ” ဟုတ်ကဲ့..ဦးလေး …” ” အဲဒီ ကုန်ကျစားရိတ်တွေဟာ အမယ်ဖေါ်မရတော့လည်း ဦးလေး စာရင်း တင်လို့ မရဘူးကွာ …နောက်ပြီး ဒီ ကုန်ကျစားရိတ်တွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ ပမဏ များလာပြီး ဦးလေးရဲ့ အပေါ်မှာ ၀န်ထုတ် ၀န်ပိုး ဖြစ်လာခဲ့ရတာပေါ့…” ” အဲဒီ ဟာတွေကို အဖေက စာရင်းရှင်းရှင်း ပေးတယ် မို့လား..ဦးလေးရ…” ” မင်းလည်း သိသားဘဲကွာ..စာရင်း တင်လို့ ရတာတော့ မင်းအဖေက စာရင်း ရှင်းပေးပါတယ် ..စာရင်း တင်မရတော့ ဦးလေးမှာ လာပြီး ပိနေတော့တာပေါ့..” ” ကဲ..ဦးလေး ..ငွေ ဘယ်လောက်ကို ကျနော် ဘယ်လို လုပ်ပေးရမယ် ဆိုတာကိုသာ ပြောပါတော့ ဦးလေးရာ…” ” အင်း..နှစ်တွေကလဲ ကြာလာပြီ ဆိုတော့ အားလုံး ( ၁၂ ) သိန်း လောက် ရှိပြီပေါ့ ..အဲဒါကို မင်း ကူညီမယ် ဆိုရင် ငါ့တူ ရဲ့ အသုံးစားရိတ် အဖြစ် ပြပေးဖို့ပါဘဲ ..ဒါ ..ဒါနော် ..ဦးလေးက မင်းကို မဖြစ်မနေ ကူညီရမယ် မပြောပါဘူး …မင်း မကူညီနိုင်လည်း ဦးလေး ဘယ်လိုမှ သဘောမထားပါဘူး ..ဒါပေမယ့် ဘယ်သူ့မှတော့ မပြောနဲ့ပေါ့ကွာ …” ” ကျနော် ကူညီပါမယ်..ဦးလေး ..” ” အင်း..မင်းရဲ့ စကား ကြားရတာ ၀မ်းသာစရာပါဘဲကွာ..ကဲ..မင်းကိစ္စလည်း အောင်မြင်ပြီ လို့သာ မှတ်ပေတော့ ငါ့တူရေ…” သန်းနု ရေချိုးအပြီး သနပ်ခါးလူးနေတော့ စက်ထဲက နာရီ သံချောင်း ( ၄ ) ချက် ခေါက်သံ ကြားလိုက်ရ၏ ။ ညနေ ( ၄ ) နာရီ ရှိပေပြီ ။
သန်းနု တယောက် သနပ်ခါး လိမ်း အ၀တ်အစားလဲပြီး အိမ်ရှေ့တွင် ထွက်ပြီး ခဏ ထိုင်နေိုက်၏ ။ စောသေးလို့ အမခင်လှ မရောက်သေး ။ ထမင်းကလဲ မဆာသေးလို့ အမခင်လှ လာမှဘဲ စားတော့မည် ။ ဒီနေ့ သန်းနုတို့ အလုပ်သမား အဖွဲ့ တခုလုံး စပါးပြတ်သွားလို့ ညနေ ( ၃ ) နာရီနှင့် အလုပ် သိမ်းကြ၏ ။ သန်းနု အိမ်ရှေ့တွင် ထိုင်ကာ ရှိသေးသည် ။ အိမ်ရှေ့သို့ ကိုသာစိန် ရောက်လာ၏ ။ ” သန်းနုရေ..သန်းနု …” ” ရှင်..ကျမ ဒီမှာ ရှိတယ် ..ဦးလေး..လာလေ …” ” အေး..ငါ အိမ်ထဲ မ၀င်တော့ဘူးဟာ ..ရင်မောင်က နေ့ခင်းက ရန်ကုန် မသွားခင် မှာသွားလို့ဟ…” ” ဘာများလဲ..ဦးလေးရ ..” ” အော်..သူ့အခန်းကို နင့်ကို ရှင်းထားပေးဖို့နဲ့ မီိးုးထိုးဖို့ အ၀တ်အစားတွေလည်း သူ့အခန်းမှာ သွားပြီး ယူထားဖို့ပါ ..အဲဒါ ကိုယ်စားလှယ်ကြီးက ရင်မောင့် အခန်းသော့ ပေးလိုက်တယ်…ရော့…” ” ဟုတ်ကဲ့ ဦးလေး..ကျမ ခုပဲ သွားလိုက်ပါ့မယ်..အကိုရင်မောင်ကလဲ သူနဲ့ နေ့ခင်းက တွေ့သားနဲ့ လူကိုတော့ ဘာမှ မပြောဘူး ..နို့မို့ နေ့ခင်းထဲက တခါထဲ ယူလာခဲ့တာပေါ့..” ပြောပြောဆိုဆို ကိုသာစိန်ရဲ့ လက်ထဲမှ သော့ကို သန်းနု လှမ်းယူလိုက်၏ ။ ” ရင်မောင်က နင့်ကို အားနာလို့ မပြောခဲ့တာနေမှာပေါ့ဟာ..” သန်းနုကို သော့ပေးပြီး ကျောခိုင်းကာ ထွက်သွားသော ကိုသာစိန်က သန်းနုကို ပြောသွားသေး၏ ။ ” ဟုတ်မှာပါ..အကို၇င်မောင်က သိပ်ပြီး အားနာတာ အရင်ကလည်း သန်းနု အားတဲ့ရက်..အတင်း သွားယူမှ မီးအိုးတိုက်ဖို့ အ၀တ်အစားတွေကို ပေးတာ ..။ သန်းနုက အိမ်ရှေ့တံခါးလေး ပိတ်ပြီး စက်အိမ်ကြီး ဖက်သို့ ထွက်လာခဲ့သည် ။ စက်အိမ်ကြီးနား ရောက်တော့ သန်းနုက အိမ်ကြီး၏ အပေါ်ထပ် လသာဆောင်သို့ မော့ကြည့်လိုက်လေ၏ ။ ခါတိုင်း ဒီ အချိန်ဆို ကိုယ်စားလှယ်ကြီးနဲ့မိုးမြင့်ရှိန်တို့ လသာဆောင်မှာ ထိုင်ပြီး အရက်သောက်နေချိန် ဖြစ်သည် ။ ဒီနေ့ ဘယ်သူမှ မရှိ ။ ဒီတခေါက် စက်သူဌေး ဘဘကြီး လာသွားတာ သူတို့နှစ်ယောက် အပိုးကျိုးသွားပုံရ၏ ။ ရင်မောင်နေရာ စက်အိမ်ကြီး၏ နောက်ဖက်ရှိ အခန်းသို့ သန်းနုက အိမ်ဘေးရှိ အုတ်ခဲလေးများ ခင်းထားသော လမ်းအတိုင်း အိမ်ကြီးကို ပတ်ပြီး ၀င်လာခဲ့၏ ။ ပြီးတော့ အခန်းထဲသို့ သော့ဖွင့်ပြီး ၀င်လိုက်သည် ။
ရင်မောင်၏ အခန်းထဲတွင် ရှိသော မီးလုံးမှာ လင်းလျှက် ရှိသည် ။ အခန်းထဲတွင် ရင်မောင် အိပ်သော ကုတင်လေးပေါ်မှာ အ၀တ်အစားနှင့် စာအုပ်တွေ ပြန့်ကြဲလို့နေ၏ ။ ခါတိုင်း ဒီလို မဟုတ် ။ အကိုရင်မောင်က သပ်သပ်ရပ်ရပ် နေတတ်၏ ။ ဒီတခါ ဘယ်လို ဖြစ်သည် မသိ ။ ကုတင်ပေါ်တွင် ရှုပ်ပွကာ နေသည် ။ သူ နေ့ခင်းက ဘဘကြီးတို့နှင့် ရန်ကုန်သို့ လိုက်မ သွားမီ ပစ္စည်းတခုခု ရှာလို့ ပွသွားတာဘဲ ဖြစ်မည် ။ ရှင်းချိန် မရတော့လို့ သူမကို ရှင်းခိုင်း ထားခဲ့တာဘဲ ဟု သန်းနု တွေးလိုက်၏ ။ ရင်မောင်၏ အိပ်ခန်းထဲသို့ ရောက်သည်နှင့် သန်းနုသည် ကုတင်ပေါ်တွင် ရှုပ်ပွနေသော စာအုပ်နှင့် အ၀တ်အစားများကို ရှင်းရန် ရင်မောင် အိပ်သော ကုတင်စောင်းတွင် တင်ပုလွဲလေး ၀င်ကာ ထိုင်လိုက်၏ ။ လူပျိုလေး အိပ်သော ကုတင်ပေါ်သို့ ၀င်ပြီး ထိုင်လိုက်သော အပျိုလေး သန်းနုမှာ ရင်ထဲတွင် နွေးကနဲ ဖြစ်လို့ သွားရသေးသည် ။ ခါတိုင်း သန်းနုလာလျှင် အိပ်ခန်းဝမှာပင်ကော ပြောစရာ ပြော ယူစရာယူပြီး ပြန်သွားခဲ့သည်ပင် ..။ အခုလို ရင်မောင်၏ အခန်းထဲသို့ မ၀င် ။ ကုတင်ပေါ်မှာပင် ထိုင်ရန် ဝေးရောပေါ့ ။ သန်းနု ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးလိုက်မိသေး ၏ ။ ကုတင်ပေါ်သို့ တင်ပုလွှဲလေး ထိုင်ပြီးသည်နှင့် သန်းနုသည် ကုတင်ပေါ်ရှိ အ၀တ်အစားများကို တထည်ချင်း ခေါက်ကာ ထပ်လိုက်ပြီး ကုတင်ဘေးရှိ ရင်မောင်၏ စာကြည့်စားပွဲပေါ်သို့တင်လိုက်၏ ။ ပြီးတော့ ကုတင်ပေါ်ရှိ ရင်မောင်၏ အဝေးသင် စာအုပ်များနှင့် ဗလာစာအုပ်များကို ကောက်ကာ ထပ်နေ၏ .။ပြီးတော့မှ သန်းနုသည် စာအ်ုပများကိုကုတင်ဘေးတွင် ကပ်ရက်ရှိနေသော စားပွဲပေါ်သို့ တင်လိုက်ပြန်သည် ။ ကုတင်ပေါ်တွင် ဘာမှ ရှိမနေတော့ပါ ။ ” ဟော…” ကုတင်၏ ခေါင်းရင်းဖက်တွင် ရွဲ့စောင်းလို့ နေသော ခေါင်းအုံးအောက်မှာ စာအုပ်တအုပ် ဒေါင့်စွန်းလေး ထွက်ကာနေတာကို သန်းနု တွေ့လိုက်ရသဖြင့် ကုတင်စောင်းတွင် တွဲလောင်းချကာထားသော သူမ၏ ခြေထောက်လေး နှစ်ချောင်းကို ကုတင်ပေါ်ကို ဆွဲလို့ တင်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်တွင် သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ပုဆစ်တုပ်လို့ ထိုင်ကာ စာအုပ်လေးကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး ကြည့်လိုက်၏ ။ ” ဟင် …” သန်းနု၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ ကြက်သီးလေးများပင် ထသွားရ၏ ။
ပြီးတော့ သူမ၏ မျက်လုံးလေးကို သူမ၏ လက်ကလေးအတွင်း ကိုင်လို့ထားသော စာအုပ်လေး ပေါ်သို့ စူးစိုက်ကာ ကြည့်နေရင်းမှ သန်းနုသည် မလုံမလဲ ပြာပြာသလဲဖြင့် သူမ၏ ဦးခေါင်းလေးကို ဘ်ာညာလှည့်ပြီး သူမ၏ မျက်လုံး ၀ိုင်းဝိုင်းလေးများကို ၀င့်ကာ အခန်းတွင်း ဘေးဘီသို့ ကြည့်လိုက်သေး၏ ။ ပြီးမှ သူမသည် မျက်လုံးလေးများကို သူမ၏ လက်ကလေး အတွင်းတွင် ကိုင်လို့ထားသော စာအုပ်လေးထံသို့ ပြန်ပို့လိုက်၏ ။ သန်းနု၏ လက်အတွင်းမှ စာအုပ်လေး၏ မျက်နှာစာတွင် ယောက်ျားကြီး တယောက်၏ လီးကြီးကို အနီးကပ် ရိုက်လို့ထားသော ရောင်စုံပုံ ဖြစ်ပြီး ထိုလီးကြီးမှာ ထိပ်ဖူးကြီး တခုလုံး ပြဲလန်နေပြီးထိပ်ဖူးကြီးမှာ နီရဲလို့ နေ၏ ။ လီးတန်ကြီး တခုလုံးမှာ မာတောင်လို့ နေပြီး လီးတန်ကြီး ပတ်လည်တွင် အကြောများ အပြိုင်းပြိုင်းထပြီး ဖုထစ်နေ၏ ။ ဓါတ်ပုံ၏ ရှင်းလင်း ပြတ်သားမှုကြောင့် လီးကြီး ထိပ်ရှိ အပေါက်ကလေးပင် မြင်တွေ့နေရ၏ ။ သန်းနုသည် ခေတ္တမျှ စိုက်ကာ ကြည့်လိုက်မိပြီးသည်နှင့် စာအုပ်လေးကို ကိုင်ထားသော သူမ၏ လက်ကလေးများမှာ တုန်တုန်ရီရီ ဖြစ်လာ၏ ။ ပြီးတော့ သူမ၏ မျင်ဝန်းလေးများထဲတွင်အရည်လေးများ လဲ့လာကာ သူမ၏ နှာသီးဖျားလေးသည်လည်း ပန်းနုရောင် သန်းကာ လာတော့၏ ။ လက်ထဲမှ စာအုပ်လေးကို သန်းနုသည် နောက်တရွက် လှန်လိုက်၏ ။ မျက်နှာဖုံး အတွင်းဖက် စာမျက်နှာတွင် စောစောက မျက်နှာဖုံးတွင် ဖေါ်ပြခဲ့သော ဧရာမ လီးကြီး၏ ပြဲလန်နေသော ဒစ်ကြီးကို လက်လေးတဖက်က ကိုင်ပြီး လီးကြီး၏ ထိပ်၇ှိ အပေါက်လေးနေရာကို လှာတခုက လျာဖျားလေးနှင့် တို့ထိနေပုံ ဖြစ်၏ ။ လီးကြီးနှင့် လျာဖျားတို့နှင့် လီးတန်ကြီး ပေါ်တွင် ဆုပ်ကိုင်ထားသော လက်ကလေးတို့သာ ပါသော ပုံကြီးချဲ့ပုံ ဖြစ်၏ ။ ထိုစာမျက်နှာနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် စာမျက်နှာတွင်တော့ ကပ္ပလီကြီး တယောက်၏ လီးကြီးကို အသား ဖြူဖြူ အင်္ဂလိပ်မလေးက စုတ်ပေးနေသော ပုံ ဖြစ်ပြီး ကပ္ပလီကြီးက မတ်တပ်ရပ်လျက် အင်္ဂလိပ်မလေးမှာ ဒူးထောက်ရက်သားလေး ဖြစ်၏ ။ သန်းနုသည် တုန်နေသော သူမ၏ လက်ကလေးဖြင့် စာအုပ်ကို နောက်ထပ် တမျက်နှာ လှန်လိုက်ပြန်၏ ။ ထို စာမျက်နှာတွင်တော့ ပက်လက်လှနနေသော အင်္ဂလိပ်မလေးက ပေါင်နှစ်လုံး ကားကာ သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲကာဖြဲပေးပြီး ကျန်လက်တဖက်က စောစောက လီးကြီးကို ဆွဲပြီး သူမဖြဲထားသော စောက်ပတ်ဝကို တေံထားသော ပုံ ဖြစ်၏ ။
ထို စာမျက်နှာနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် စာမျက်နှာတွင်တော့ အင်္ဂလိပ်မလေး၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ဧရာမလီးကြီးက တ၀က်မျှ စိုက်လို့ ၀င်နေပြီး စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားများမှာ လီးတန်ကြီး ဘေးတွင် ကပ်ညိပြီး ခွက်ဝင်နေပုံကို အနီးကပ် လီးနှင့် စောက်ပတ်တို့သာ ပါသော ပုံကြီး ချဲ့ကာ ရိုက်ထားသော ပုံ ဖြစ်၏ ။ ဆက်လက်ပြီး သန်းနုသည် စာအုပ်လေးကို တရွက်ချင်းလှန်လို့ တဖြေးဖြေးချင်းကြည့်လို့သွားရာ နောက်ထပ် စာမျက်နှာများတွင် ကပ္ပလီကြီးနှင့် အင်္ဂလိပ်မလေးတို့ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် လိုးနေကြပုံကို ရိုက် ထားပြီး ထို ပုံစံအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် လိုးနေကြပုံများနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် စာမျက်နှာများတွင်တော့လိုးနေကြသော ပုံစံအရ ဖြစ်ပေါ်လို့နေသော လီးကြီးနှင့် စောက်ပတ်ကြီးတို့သာ ပါသော ပုံကြီးချဲ့ ရောင်စုံပုံ ..အနီးကပ် ပုံများဖြင့် ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ရိုက်ကာ ပြထားသော ပုံများ ဖြစ်သည် ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသော ယောက်ျားတယောက်၏ လီးကို တခါဘူးကမှ မတွေ့မမြင်ခဲ့ဘူးသော အသက် ( ၁၉ ) နှစ် ကျော်ကျော်သာ ရှီသေးသည့် အပျိုမလေး သန်းနုသည် ပြောင်မြောက်လှသော ဓါတ် ပုံထဲက လီးကြီးကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် အနီးကပ် မြင်ရသည့်အပြင် ထိုလီးကြီး၏ စွမ်းဆောင် လှုပ်ရှားပုံကိုပါ အဆင့်ဆင့် တွေ့မြင်ရသည် ဖြစ်လို့ သန်းးနု၏ အစိမ်းသက်သက် ဖြစ်နေသေးသောအသွေးအသား တို့သည် အထိန်းအကွပ်မဲ့ လှုပ်ရှားလို့ လာကြတော့၏ ။ သန်းနု၏ မျက်နှာလေး တခုလုံးတွင် အနီရောင် သန်းလာသကဲ့သို့ သူမ၏ ခြေဖျား လက်ဖျားလေးများသည်လည်း ခြောက်သွေ့လာသည် ဖြစ်လို့ မကြာခဏလည်း တံတွေးများ မြို ချနေရ၏ ။ သန်းနု၏ စောက်ပတ် အတွင်းမှလည်း မည်သို့ ဖြစ်သည်ကို သူမဘာသာ အမည်တပ်ပြီး မပြောနိုင်သော ခံစားချက် တမျိုး ဖြစ်ပေါ်လို့ လာတော့၏ ။ သန်းနု၏ နှာသီးဖျားလေးမှ အသက်ရှုသွင်းသံ..ပြန်ထွက်သံတို့သည် သူမဘာသာပင် ကြားလာရသည်ထိ ပြင်းထန်လာကြ၏ ။ စာအုပ်လေး၏ နောက်ဆုံး စာမျက်နှာတွင်တော့ အရည်များဖြင့် စိုရွှဲ တင်းပြောင်နေသော ဧရာမ လီးတန်ကြီးကို လက်လေးတဖက်က ဆုပ်ကိုင်လို့ထားပြီး ထိုလီးကြီး၏ ပြဲလန်နေသော ထိပ်ဖူးကြီး ထိပ်မှ ပျစ်ခဲသော အဖြူရောင် အရည်များ ပန်းလို့ ထွက်နေပုံပင် ဖြစ်၏ ။ သန်းနု၏ စောက်ပတ်ထဲတွင် စစ်ကနဲ တချက် ဖြစ်လို့သွားပြီး သူမ၏ စောက်ပတ်အုံသည်လည်း တင်းကနဲ တချက် ဖြစ်လို့သွားရ၏ ။ သန်းနုသည် ကုတင်ပေါ်ရှိ အိပ်ရာပေါ်တွင် ပုဆစ်တုပ်ကာ ထိုင်နေရာမှသူမ၏ ဖင်သားကြီးများကို အိပ်ရာပေါ်သို့ ချကာ ထိုင်လိုက်ပြီး သူမ၏ ဒူးလေးတဖက်ကို ထောင်လိုက်ကာပေါင်ကြားသို့ သူမ၏ လက်လေးတဖက်သည် ၀င်လို့သွားသည် ။
ပြီးတော့ သန်ဒနုသည် သူမ၏ စောက်ပတ်ကို ထမိန်လေး ပေါ်မှပင် အသာ လက်ကလေးဖြင့် ပွတ်ပေးလိုက်၏ ။ သွေးသားများ ဆူပွက်လို့ နေသော အချိန်အခါတွင်အာရုံကြော အာရုံ ခံစားမှုများ၏ အဓိကနေရာလေးသည် ထကြွနေသော သွေးသားများကြောင့် လှုပ်ရှား ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်များ အဆက်မပြတ် ဖြစ်ပေါ်ကာ ခံစားနေရချိန်တွင် တစုံတခုက ထိုနေရာလေးကို လာရောက် ထိတွေ့မိပြီး ထိတွေ့သော အရာကလည်း ရပ်တည်မနေဘဲ ရွေ့လျားကာ ပွတ်ပေးနေတော့ သာယာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာရတော့၏ ။ သန်းနုသည် သူမ၏ စောက်ပတ်လေးကို ထမိန်ပေါ်မှပင် သူမ၏ လက်ကလေးဖြင့် ပွတ်ပေးနေရင်းက အရသာများ တွေ့ကာ နေ၏ ။ သူမ၏ ကျန် လက်အတွင်းမှ ဓါတ်ပုံစာအုပ်ကိုလည်း သူမသည် လွှတ်မချသေးဘဲ သူမ၏ မျက်လုံးလေးများက အာသာ တငမ်းငမ်းဖြင့် ကြည့်နေလျှက်ပင် ရှိနေသေး၏ ။ ခဏမျှ ကြာသွားသော အခါတွင် စောက်ပတ်လေးကို ထမိန်ပေါ်မှ ပွတ်လို့ပေးနေသော သူမ၏ လက်ကလေးသည် စောက်ပတ်အကွဲကြောင်း တည့်တည့်တွင် ထမိန်လေးပေါ်မှ ပွတ်ပေးလိုက်စဉ်မှာ စိုစိစိ အရည်လေးက သူမ၏ လက်ကို လာပြီး ထိတွေ့သဖြင့် သန်းနုသည် ထို လက်ကလေးကို သူမ၏ မျက်နှာရှေ့သို့ မြှောက်ကာ ကြည့်လိုက်၏ ။ ပြီးတော့ စိုစိစိ အရည်လေး ထိတွေ့သွားခဲ့ရသော သူမ၏ လက်ဖျားလေးကိုလည်း သန်းနုသည် သူမ၏ နှာသီးဖျားတွင် ကပ်ကာ နမ်းကာ ကြည့်လိုက်မိ၏ ။ ထို အချိန်မှာပင် သန်းနု၏ ကိုယ်လုံးလေးပေါ်သို့ သန်မာသော လက်နှစ်ဖက်က ရုတ်တရက် ကျရောက်လာပြီး သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို တင်းကြပ်စွာ ပွေ့ဖက်ပြီး အိပ်ရာပေါ်သို့ ဆွဲကာ လှဲချလိုက်တော့၏ ။ သန်းနု၏ လက်အတွင်းမှ စာအုပ်လေးသည် လွတ်ကျသွားပြီး သန်းနုသည်လည်း အိပ်ရာပေါ်သို့ ဒူးလေးနှစ်ဖက် ထောင်ကာ ပက်လက်ကလေး လန်ကာ ကျသွားတော့၏ ။ ” ဟင်…..ကိုကိုမြင့်…မ…မလုပ်ပါနဲ့..အကို…” သန်းနု စကားဆုံးအောင်ပင် မပြောလိုက်ရချေ ။ သူမ၏ နှတ်ခမ်းပါးလေးများ ပေါ်သို့ မိုးမြင့်ရှိန်၏ နှုတ်ခမ်းများက ဖိကပ်ကာ အတင်းပင် စုတ်နမ်းတော့၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန်သည် သန်ဒနုနှင့် အရွယ်တူ သူငယ်ချင်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး သူဌေးကြီး၏ သား ဖြစ်လို့ သူ့ကို သန်းနုက ငယ်စဉ်ကပင် ကိုကိုမြင့်ဟု ခေါ်ခဲ့၏ ။ ထို့နောက် မိုးမြင့်ရှိန်က သန်းနု၏ နှုတ်ခမ်းလေးများကို ဖိကပ်ကာ စုတ်နမ်းလျက် ရှိနေရာမှ သူ၏ လက်တဖက်ဖြင့် သန်ဒနု၏ ထမိန် အောက်နားစလေးကို လှမ်းဆွဲကာ သူမ၏ ခါးဆီသို့ လှန်ကာ တင်လိုက်၏ ။ သန်းနု၏ လက်ကလေးတဖက်က အတင်းပင် သူမ၏ ထမိန်လေးကို ပြန်ကာ ဆွဲချရန် ပြင်လိုက်သော်လည်း မိုးမြင့်ရှိန်၏ လက်က သန်းနု၏ စောက်ပတ်အုံလေးပေါ်သို့ ဆုပ်ကိုင်ကာ ခပ်ဖြေးဖြေး ဖျစ်ညှစ်လိုက်သဖြင့် သန်းနုသည် ခါးကလေး တွန့်သွားရသည် ။ သူမ၏ ထမိန်လေးကိုတော့ပြန်ပြီး ဖုံးဖိခြင်း မပြုနိုင်တော့ချေ ။
သန်းနု၏ စောက်ပတ်ပေါ်ရှိ မိုးမြင့်ရှိန်၏ လက်သည် စောက်ဖုတ်ပေါ်တွင် ခပ်ဖိဖိလေး ၄..၅ချက်လောက် ပွတ်ပေးပြီးသည်နှင့် သူမ၏ စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုကို လက်ညှိုး လက်မတို့ဖြင့် အသာဖြဲပြီး လက်ခလယ် လက်ချောင်းကို လက်တဆစ်သာသာလောက် သန်းနု၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်တော့၏ ။ သန်းနု၏ နှုတ်ခမ်းများမှာ မိုးမြင့်ရှိန်၏ နှုတ်ခမ်းများက ဖိကပ် စုတ်နမ်းထားသဖြင့် မည်သည့်အသံမျှ ထွက်မလာဘဲ သူမ၏ ခါးလေးကတော့ ကော့သွားပြီး သူမ၏ ထောင်ထားသော ပေါင်နှစ်လုံးမှာ ကား သွားတော့၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန်သည် သန်းနု၏ နှုတ်ခမ်းပါးလေးများကို သူ၏ နှုတ်ခမ်းများဖြင့် ဖိကပ်ကာ စုတ်နမ်းထားသည့်အပြင် လျှာဖြင့်လည်း သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးများကို ပွတ်ကာပေးနေသေး၏ ။ ထို့ပြင် သန်းနု၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ လက်တဆစ်သာသာ သွင်းထားသော မိုးမြင့်ရှိန်၏ လက်ခလယ်သည်လည်း အငြိမ်မနေဘဲ ထုတ်လိုက် သန်းနု၏ စောက်ပတ်ဝ၏ အတွင်းသားလေးများကို ကပ်ပြီး ၀ိုက်ကာ ၀ိုက်ကာဖြင့် ပွတ်တိုက် လုပ်ပေးနေသဖြင့် သန်းနု၏ သွေးသားတို့သည် ပြောင်းဆန်အောင် သောင်းကျန်းလာကြတော့၏ ။ သန်းနု၏ ထောင်ထားသော ပေါင်ဖြုဖြု နှစ်လုံးသည် စုလိုက် ကားလိုက်ဖြင့် ဖြစ်လာသည် ။ မိုးမြင့်ရှိန်သည် သန်းနု၏ စောက်ပတ် အတွင်းသို့ သူ၏ လက်ခလယ်ဖြင့် သွင်းချီ ထုတ်ချီ လုပ်ပြီး မွှေနှောက်ပေး နေရုံသာ မကဘဲ သူ၏ လက်မထိပ်လေးဖြင့်လည်း စောက်ပတ်ထိပ်နားရှိ စောက်စိလေးကို မထိတထိဖြင့် ကော် ကော်ထိုးကာ ကလိပေး နေသေး၏ ။ သန်းနု၏ စောက်ပတ်ကြီးသည် တင်းမာဖေါင်းကားနေပြီး စောက်ပတ် အတွင်းမှ စောက်ရည်လေးများသည်လည်း စောက်ပတ်ဝသို့ တစိမ့်စိမ့် ထွက်ကာ လာနေကြပြီ ဖြစ်၏ ။ ထို့ပြင် သန်းနု၏ လက်လေးတဖက်ကလည်း သူမကို နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ကာ စုတ်လို့ ပေးနေသော မိုးမြင့်ရှိန်၏ အင်္ကျီဝတ်မထားသော ကျောပြင်ပေါ်သို့ အသာအယာ တင်လာသည် ။ သန်းနု၏ စောက်ပတ်အ၀ရှိ စောက်ပတ်အတွင်းသားလေးများသည်လည်း စောက်ပတ်ဝသို့ ထိုးသွင်းကာ ထုတ်ချီ သွင်းချီ လုပ်ပေးနေသော မိုးမြင့်ရှိန်၏ လက်ခလယ်လက်ချောင်းနှင့် ထိတွေ့ ပွတ်တိုက်နေမှုကြောင့် စောက်ရည်လေးများ စိမ့်ထွက် စိုစွတ်လာကြသည် ။ စောက်ပတ်အတွင်းသားလေးများသည် မိုးမြင့်ရှိန်၏ လက်ခလယ် လက်ချောင်းလေးကို ရင်ဆိုင် ထိတွေ့လို့ လာကြတော့သည် ။ နူးညံ့ထွေးအိ စိုစွတ်သော စောက်ပတ်အတွင်းသားလေးများသည် ရှုံ့ချီပွချီ ဖြစ်လာကြသည် ။ မိုးမြင့်ရှိန်၏ ကိုယ်အတွင်းရှိ သွေးသားတို့သည် ပြင်းပြလာသော သူ၏ ကာမဇောများကြောင့် ဆူပွက်လာခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပြီး သူ၏ ဆူပွက်နေသော သွေးသားတို့ဆီမှ လွင့်ပျံကာ ထွက်လာသော အပူငွေ့များကို သူ၏ နှာသီးဖျားမှ တဆင့် ဟင်းကနဲ နေအောင် ထုတ်ပစ်လိုက်၏ ။
မိုးမြင့်ရှိန်က သူ၏ မျက်နှာကို သန်းနု၏ နုနုငယ်ငယ် မျက်နှာလေးဆီမှ ခွာကာ သူ၏ ကိုယ်လုံးကိုလည်း သန်းနု၏ ကိုယ်လုံးပေါ်မှ ခွာလိုက်သည် ။ ပြီးသည်နှင့် သန်းနု၏ ရင်ဘတ်ရှိ အင်းကျီ နှိပ်စေ့လေးများကို အလျင်အမြန် ဖြုတ်ပစ်လိုက်တော့၏ ။ ” အို..ကိုကိုမြင့်ရယ် ..သန်းနုကို သနားပါအုံး …မရက်စက်ပါနဲ့ ကိုကိုမြင့်ရယ်…နော်…” သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးက လှုပ်ရှာခွင့် ရသွားပြီ ဖြစ်လို့ မျက်၇ည်ဝဲ၀ဲလေးဖြင့် ငိုသံလေး စွက်ကာ မိုးမြင့်ရှိန်ကို တောင်းပန်သည် ။ ပြီးတော့ လက်ဖမိုးလေးဖြင့် သူမ၏ မျက်လုံးများဆီက မျက်ရည်ဥများကို သုတ်ကာ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို လူးလူးလှိမ့်လှိမ့်လေး တချက်ပြုလျက် မိုးမြင့်ရှိန် ရှိရာဖက်သို့ ကျောလေးပေးကာ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို စောင်းလိုက်၏ ။ ထိုအခါတွင်ိုးမြင့်ရှိန်သည် သန်းနု၏ နောက်ကျောရှိ ဘော်လီအင်းကျီအဖြူလေး၏ ကြယ်သီးများကိုပါ တပါတည်း လါယ်ကူစွာ ဖြုတ်ခွင့်ရသွားသဖြင့် အလျင်အမြန်ပင် ဖြုတ်၏ ။ သန်းနု၏ မြှောက်ပြီး မျက်ရည် သုတ်နေသော လက်မှတဆင့် ဘော်လီအင်းကျီလေး၏ ပုခုံးသိုင်းကြိုးနှင့် အပေါ်တွင် ၀တ်ထားသည့် နှိပ်စေ့ကြယ်သီးများ ဖြုတ်ပြီးနေသော လက်ပြတ် အင်းကျီလေး၏ လက်ပေါက်တို့ကိုပါ ပင့်တင်ကာ ချွတ်လိုက်၏ ။ ထိုအချိန်တွင် သန်းနုသည် သူမ၏ စောင်းထားသော ကိုယ်လုံးလေး၏ အပေါ်ဖက်ရှိ လက်ကလေးကို တံတောင်ဆစ်မှ ကွေးကာ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးပေါ်သို့ ပြန်ပြီး တင်လိုက်သဖြင့် ထို လက်ကလေးဘက်ရှိ အင်းကျီလက်ပေါက်နှင့် ဘော်လီအင်းကျီ ပုခုံးသိုင်းကြိုးတို့မှာ ကျွတ်ခွာထွက်သွားတော့၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန်သည် ကျန်ရှိနေသော သူမ၏ အခြား လက်တဖက်ရှိ အင်းကျီလက်ပေါက်နှင့် ဘော်လီပုခုံးသိုင်းကြိုးတို့ကိုပါ ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ ထိုအခါတွင် ၀င်းလဲ့နေသော သူမ၏ ရင်ညွန့်သားလေးများ သည် ထွက်ပေါ်လာကြတော့၏ ။ ၀င်းမွတ်ကာ တင်းတင်းလေး ပြည့်ဖြိုး ထွေးအိနေသော သူမ၏ အကြမ်းပုဂံလုံး အကြီးစား မှောက်ထားသည့် အရွယ် ပမာဏ သာသာရှိသည့် မက်မောဖွယ် နို့လေးနှစ်လုံးမှာလည်း တုန်တုန် ယင်ယင်လေးဖြစ်ကာ ထွက်ပေါ်လာတော့၏ ။
” သန်းနု..သန်းနု ကို သနားပါအုံး..အကိုရယ် …ဟင့်…” ” သန်းနုရာ..အကိုက မင်းကို အတည်ကြံတာပါ ..မင်းကို လက်ထပ်ယူမှာပါ ..ယုံပါ သန်းနုရယ်…” ” မ…မ ဖြစ်နိုင်တာ…အကိုရယ် …ဘဘကြီးတို့က..ဘယ်လိုလုပ်ပြီး..သဘောတူမှာလဲ…နောက်ပြီး..ကိုယ်စားလှယ်ကြီးကလည်း သန်းနုတို့ကို ချက်ချင်း ခွဲပစ်လိုက်မှာပေါ့..အဟင့်…ဟင့်…မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…အကိုရယ်….သန်း…သန်းနုကို သနားပါ..ကိုကိုမြင့်ရယ်…နော်…..” ” သန်းနုရာ…ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ….မင်းကို အိကု ချစ်နေတာ ကြာလှပါပြီကွာ….” မိုးမြင့်ရှိန်မှာ ပါးစပ်ကလဲပြော လက်ကလဲ သန်းနု၏ နို့လေးများကို သူ၏ လက်ဖ၀ါးထဲ ထည့်ကာ ပွတ်ပေးနေသဖြင့် သန်းနုသည် သူမ၏ မျက်လုံးလေးများကို မှေးမှိတ်လို့ ထားရာမှ တဟင့်ဟင့်ဖြင့် ငိုသံပါလေးဖြင့် ငြင်းဆန်ကာ အသနားခံ နေခြင်း ဖြစ်၏ ။ သန်းနု၏ နုတ်ဖျားက ငြင်းဆန်ကာ နေရှာသော်လည်း သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကမူ ဆန့်ကျင်ဖက် သွေးသားတို့၏ ထိတွေ့မှုကြောင့် ကာမဇောလေးများ ကြွလျက် အင်အားများ ချိနဲ့ကာ အထိအတွေ့များမှာ သာယာမိန်းမောလျက် ပျော့ခွေ နုံးချိ နေ၏ ။ သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်လေးကတော့ ငြင်းဆန် ရုန်းကန်နိုင်စွမ်းများ ကုန်ခမ်းကာ သာယာမှုလေးများတွင်သာ မိန်းမောလျက် ထိုဟာယာမှုများ ပျောက်ကွယ်သွားမှာကိုပင် စိုးထိတ်နေသည် ။ သန်းနု၏ ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်းတွင် အ၀တ်အစားများ ကင်းမဲ့သွားခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပြီး သူမ၏ ထမိန်လေးကတော့ သူမ၏ ခါးတွင် လုံးကာ ပုံနေ၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန်က သူ၏ လက်ဖြင့် သန်းနု၏ ထမိန်လေးကို သူမ၏ ခြေထောက်ဖက်မှ ဆွဲလို့ ချွတ်ပစ်လိုက်ရာ သန်းနုက သူမ၏ မျက်ဝန်းလေးများဆီမှ မျက်ရည်စလေးများကို သူမ၏ လက်ကလေးဖြင့် ဘယ်ပြန်ညာပြန် သုတ်လျက် သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို လူးကာလှိမ့်ကာဖြင့် ဖင်သားကြီးများကို ကြွကာ ပေးလိုက်သဖြင့် ထမိန်လေးမှာ သူမ၏ ခြေထောက်ဖက်မှနေပြီး ကွင်းလုံးကျွတ်ကာ ထွက်သွားတော့၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန်သည် သန်းနု၏ ကိုယ်လုံးလေး ဘေးမှာ ထိုင်လျက် ၀တ်လစ်စလစ်ဖြစ်လို့သွားရှာသော သန်းနု၏ ကိုယ်လုံးလေးကို တပ်မက်စွာ ကြည့်လိုက်၏ ။ ” သန်းနုရယ်…လှလိုက်တာ…” ” အကိုရယ်..သန်းနုကို မသနားတော့ဘူးလားဟင် ..” ” အကို သန်းနုကို ဒီညဘဲ ခိုးမှာပါ ..သန်းနုရယ်…” ” ဟင်..အကို ..” ” ဒီည ( ၁၀ ) နာရီလောက်ကျရင် တံတားကို ဆင်းခဲ့…သန်းနု…ပြီးတော့ အဲဒီမှာ ကပ်ထားတဲ့ ပဲ့ထောင်ထဲသာ ဆင်းပြီး သွားလိုက်..ပကိုက ညောင်ပင်စုကနေ စောင့်နေမယ်..ဟိုမှာ ညတွင်းချင်း လက်ထပ်ကြတာပေါ့..သန်းနုရယ်…နော်…” ” အကို…ရယ်…” သန်းနု၏ လက်ကလေးတဖက်က မိုးမြင့်ရှိန်၏ လက်တဖက်ကို အားကိုးတကြီး ဆုတ်ကိုင် ထျစ်ညှစ်လာ၏ ။
သူမ၏ လက်ဖျားလေးများမှာ စောစောကလို အေးစက်လို့ မနေတော့ဘဲ ပူပူနွေးနွေးလေး ဖြစ်ကာနေသည်ကို မိုးမြင့်ရှိန် ခံစားလိုက်ရ၏ ။ စကားဆုံးသည်နှင့် မိုးမြင့်ရှိန်သည် သန်ဒနု၏ မျက်နှာလေးဆီသို့ သူ၏ မျက်နှာကို ငုံ့ကာ သူမ၏ နဖူးလေးကို မြတ်နိုးစွာဖြင့် နမ်းလိုက်၏ ။ ပြီးတော့ သန်ဒနု၏ သနပ်ခါး ပါးကွက်လေးများ တင်ကာ ထားသော ပါးမို့မို့လေး နှစ်ဖက်ကို ဖိလို့ နမ်းရှိုက်လိုက်သည် ။ ပြီးသည်နှင့် မိုးမြင့်ရှိန်သည် သူမ၏ နို့လေးများ ဆီသို့ မျက်နှာအပ်ကာ နို့လေးနှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် စို့တော့၏ ။ သန်းနုမှာတော့ တလူးလူး တလှိမ့်လှိမ့်ဖြင့် ကာမဇောများ ကြွတက်လာနေပြီး သူမ၏ လက်ကလေး နှစဖက်ကတော့ မိုးမြင့်ရှိန်၏ အ၀တ်အစား နဂိုထဲက ၀တ်မထားသော ကျောပြင်ကြီးပေါ်သို့ အ သာယာလေး တင်ကာ သူမ၏ မျက်လုံးများကို မှိတ်လျက် ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်ကာ မိန်းမော နေလေတော့သည် ။ မိုးမြင့်ရှိန်သည် သန်းနု၏ နို့လေးနှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် စို့ပေးနေရင်းမှ သူ၏ လက်ဖြင့် သန်းနု၏ နံစောင်းလေးများ ၀မ်းဗိုက်သားလေးများနှင့် ပေါင်တန်နှစ်ဖက်တို့ကို ပွတ်သပ် ဆုပ်နယ် ဖျစ်ညှစ် ကာ ပေးနေ၏ ။ ထို့ပြင် သန်းနု၏ လုံးတစ် ကားအယ်နေသော ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဖင်သားကြီးများ အောက်ကိုပါ လက်ကို ထိုးသွင်းပြီး ဆုပ်နယ်ဖျစ်ညှစ်ကာ ပေးနေသေး၏ ။ သန်းနုကတော့ သူမ၏ အ၀တ်မဲ့ ဖြူစင်ဝင်းပ လှပ အချိုးကျ မို့မောက် ကားစွင့် လုံးတစ်နေသော ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အိပ်၇ာပေါ်တွင် ပက်လက်လေး နေကာ စင်းပေးထားရုံမှတပါး ဘာများ တတ်နိုင်ပါဦးမည်နည်း ..။ နို့စို့ပေးနေသော မိုးမြင့်ရှိန်၏ နှုတ်ခမ်းလွှာ အတွင်းမှ လျာလေးသည် သန်းနု၏ နို့သီးခေါင်းလေးများ ထိပ်ဖျားဆီသို့ ထိလာကာ ယက်လို့ ပေးလိုက်သောအခါ များတွင်တော့ သန်းနုခမျာမှာ သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်လေး တခုလုံး ဖြိုးဖြိုးဖျင်းဖျင်း ဖြစ်လျှက် အသက်ရှုလေးများပင် မှားလို့ သွားရ၏ ။ ထို့ပြင် စင်းလို့ထားသော သူမ၏ ခြေထောက်လေး နှစ်ချောင်းသည်လည်း ကွေးလိုက် ဆန့်လိုက် ဖြစ်နေရာမှ သူမ၏ ဒူးခေါင်းလေးများသည် ကွေးလျက် ဖြူဖွေးနုနယ်နေသော ပေါင်နှစ်လုံးမှာ ထောင်လို့ လာတော့၏ ။ သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့ကို ပွတ်လို့ ပေးနေသော မိုးမြင့်ရှိန်၏ လက်သည် သူမ၏ ပေါင်လုံးလေး နှစ်လုံးကြားရှိ သန်းနု၏ အမွှေးနက်ကလေးများ ကောက်ကောက်ကွေးကွေးလေးများ ဖြစ်လို့နေသော စောက်ဖုတ်အုံလေးပေါ်သု့ ရောက်ရှိသွားပြီး သန်းနု၏ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး စောက်ဖုတ်အုံလေးကို တချက် နှစ်ချက်လောက် ဖျစ်ညှစ်ပေးလိုက်၏ ။ ပြီးတော့ သူ၏ ကိုယ်လုံးကို သန်းနု၏ ကိုယ်လုံးလေးပေါ်မှ ခွာကာ ကြွလိုက်ပြီးနောက် မိုးမြင့်ရှိန်သည် သန်းနု၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြား တွင် ၀င်ကာ ထိုင်လိုက်ပြီးသူ၏ ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်တော့၏ ။
သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေး အပေါ်မှ မိုးမြင့်ရှိန်၏ ကိုယ်လုံးသည် ကြွလို့သွားသဖြင့် မှေးမှိတ်လို့ ထားသော သူမ၏ မျက်လုံးလေးများကို ဖွင့်ကာ ကြည့်မိလိုက်သော သန်းနု၏ မျက်လုံးလေးများသည် ၀ိုင်းကာ သွားပြီး သူမ၏ အသဲထဲတွင် အေးကနဲ ဖြစ်ကာ သွားရတော့သည် ။ ပုဆိုးအတွင်းမှ ထွက်ပေါ်လို့ လာသော မိုးမြင့်ရှိန်၏ လီးကြီးသည် အရှည် ( ၆ ) လက်မ ထက် မနည်းပေ ။ ညိုကာ တုတ်နေပြီး လုံးပတ် ကျပ်လုံးသာသာတောင် ရှိလိမ့်မည် ဖြစ်၏ ။ လီးကြီး၏ ထိပ်ဖူးကြီးသည် ပြဲလန်နေပြီး ထိပ်တွင် အရည်များနှင့် စိုရွှဲနေကာ လီးတန်ကြီးမှာ တဆတ်ဆတ် ဖြစ်ကာနေ၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန်သည် သန်းနု၏ ထောင်လို့ ထားသော ပေါင်ဖြူဖြူလေး နှစ်လုံးကို အသာ ကားပေးလိုက်ပြီး သူ၏ လီးကြီးကို သန်းနု၏ စောက်ပတ်ဝတွင် ထိကာတေ့လိုက်၏ ။ သန်းနု၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ တချက်မျှ တုန်ကနဲ ဖြစ်သွားကာ သူမ၏ မျက်လုံးလေးများကို မှိတ်ကာ ထားလိုက်တော့၏ ။ ထိုစဉ်မှာပင် သူမ၏ စောက်ပတ်ဝမှာ တေ့လို့ထားသော မိုးမြင့်ရှိန်၏ လီးကြီးသည် တဖြေးဖြေး စောက်ပတ်ထဲသို့ ၀င်လို့ လာတော့၏ ။ ” ဗျစ်..ဗျစ်..ဗျစ်….” ” အင့်…အအ…အမလေး ….ကျွတ်ကျွတ်…” သန်းနုမှာ သူမ၏ ပေါင်ဖြူဖြူလေး နှစ်လုံးကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားပေးလိုက်ပြီး သူမ၏ စောက်ပတ်ကိုလည်း ကော့လို့ ပေးလိုက်၏ ။သန်းနု၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ သူ၏လီးကြီးကို တဖြေးဖြေး ထိုးသွင်းနေသော မိုးမြင့်ရှိန်သည် သူ၏ လီးကြီးထိပ်တွင် သန်းနု၏ စောက်ပတ်ထဲမှာ အရာဝတ္ထုတခုက ရှေ့ကနေပြီး တားဆီးကာသလို ထိတွေ့လာရသဖြင့် မိုးမြင့်ရှိန်သည် သူ၏ လီးကြီးကို သန်းနု၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းနေရာမှ အားဖြင့် ဖိကာ ဆောင့်ပြီး သွင်းလိုက်၏ ။ ” ဗျစ်..ဗျစ်..ဖွတ်..” ” အား..အမေ့…အား….သေပါပြီ …အ…ကျွတ်…ကျွတ်…” သန်းနု၏ ခါးလေးမှာ အိပ်ယာပေါ်မှ အတော်လေး မြောက်ကြွကာ တက်သွားရသလို သူမ၏ ဦးခေါင်းလေးမှာလည်း ဘယ်ညာ ခါရမ်းသွားရ၏ ။ ပြီးတော့ သူမ၏ ပေါင်ဖြူဖြူလေး နှစ်လုံးမှာလည်း အစွမ်းကုန်ကားပေးထားသဖြင့် ပေါင်တွင်းကြောနှစ်ဖက်မှာ ထောင်လို့ပင် ထနေ၏ . သူမ၏ နုထွေးဖြူဖွေးလို့ နေသော ပေါင်တွင်းသားလေးများမှာတော့ တဆတ်ဆတ် တုန်လို့နေသည် ။
မိုးမြင့်ရှိန်က သူ၏ လီးကြီးကို သန်းနု၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်ရာမှာ တပ်မက် မက်မောဖွယ် ကောင်းလှသော သန်းနု၏ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး အမို့အမောက် အစွင့်အကားများဖြင့် အချိုးကျ လှပလှသော ကိုယ်လုံးလေးကို မမှိတ်မသုံ မြင်တွေ့နေရကာ သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်သော လီးကြီးမှာလည်း သန်းနု၏ ကျဉ်းကြပ်နေသော စောက်ပတ် အတွင်းသား နုနုလေးများနှင့် စီးကနဲ ပွတ်တိုက်သွာားရသည် ဖြစ်လို့ မိုးမြင့်ရှိန်သည် စိတ်မထိန်းနိုင်ဖြစ်ကာ သန်းနု၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ အဆုံး ၀င်နေပြီ ဖြစ်သော သူ၏ လီးကြီးကို အဆုံးနီးပါး ပြန် ဆွဲထုတ်ကာ ခပ်သွက်သွက်ပင် အားဖြင့် ဖိဆောင့် လိုးသွင်းကာ ခပ်သွက်သွက် လိုးလေတော့၏ ။ ” ဖွတ် ..ဖွတ်…ပလွတ်…” ” အင့်..အမေ့…သေပါပြီ . . ” ” ဖွတ်..ပလွတ်…” ” အား…အမလေး …နာ…နာလိုက်တာ….” ” ဖွတ်..ဖွတ်..ပလွတ်…” ” အား…တော်…တော်ပါတော့..ကိုရယ်….အား…ကျွတ်….ကျွတ် ….ကျွတ်…” ” ဖွတ်…ပလွတ် …” ” ခဏလောက် သည်းခံလိုက်ပါဟာ..အစမို့ပါ ..နောက်တော့ ကောင်းလာမှာပေါ့…” ” ဖွတ်..ပလွတ် …” ” အား..ကျွတ်..ကျွတ်..ရက်စက်လိုက်တာ ကိုရယ် …အင့်..ဟင်…”သန်းနုရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးမှာ နာရှာလွန်းလို့ ကော့ပျံနေ၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန်ကလည်း သူ၏ လိုးအားကို မလျော့သည့်အပြင် သန်းနု၏ မခံမရပ်နိုင် ကော့ပျံကာ ဖြစ်နေသော ကိုယ်လုံးလေးကို မြင်တွေ့နေရပြီး သန်းနု၏ မချိမဆန့်လေး ညည်းတွားသံလေးများ ကြားရတော့ မိုးမြင့်ရှိန်၏ ကာမစိတ်များမှာ အားရကျေနပ် တက်ကြွလာပြီး ပိုလို့တောင် အားဖြင့် ဖိဆောင့်ကာ လိုးတော့၏ ။ ” ဖွတ်..ပလွတ်…” ” အမေ့..အား..ဟင့်ဟင့် …” ” အား..ကျွတ်ကျွတ် …..” ” ဖွတ်..ပလွတ်..” ” အ…အင့်…” ” ဖွတ်..ပလွတ်…” ” အင့်….ဟင့်…” ” ဖွတ်..ပလွတ်…” မိုးမြင့်ရှိန်က အားဖြင့် ဖိဆောင့်လို့ အချက် ( ၃၀ )မျှ ဆောင့်ကာ လိုးပြီးသော အခါတွင်တော့ သန်းနု တဆတ်ဆတ် တုန်ကာနေသော နှုတ်ခမ်းဖျားလေးများမှ ညည်းသံလေးများ ထွက် မလာတော့ပေ ။ ကော့ပျံနေသော သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာလည်း ငြိမ်သက်သွား၏ ။ ” ဖွတ်..ပလွတ်…” ” ဖွတ်..ပလွတ်…” ” ဖွတ်..ပလွတ်..” သန်းနုမှာ သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီး အတွင်းတွင် အရည်များ ရွှဲရွှဲစိုကာ နေပြီ ဖြစ်သည့်အပြင် သူမ၏ ယားလို့နေသော စောက်ပတ် အတွင်းသားလေးများကိုလည်း မိုးမြင့်ရှိန်၏ သန်မာတောင့်တင်းလှသော လီးတန်ကြီးက အားပါးတရ ဆောင့်ကာဆောင့်ကာဖြင့်ပွတ်ကာနေသဖြင့် သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီး အတွင်းတွင် အရသာများ ပိုလို့ကောင်းလာရတော့၏ ။ ” ဖွတ်ပလွတ်…ဖွတ် ပလွတ်…” ” ဖွတ် ပလွတ်..” ” ဖွတ် ပလွတ်..” ” နာသေးလားဟင်..သန်းနု..” ” ဟင့်အင်း..” ” ဖွတ်ပလွတ် ..” ” ဖွတ် ပလွတ်…” ” ကောင်းရော ကောင်းလာပြီလားဟင်…” ” ဖွတ် ပလွတ်..” ” သိဘူး….အ..ဘာတွေ မေးနေတာလဲလို့……အ…အ….” ” ဖွတ်ပလွတ်..ဖွတ်ပလွတ်….” မိုးမြင့်ရှိန်က တချက် ပြုံးလိုက်ကာ သူ၏ ကိုယ်ကို ရှေ့သို့ နဲနဲတိုးပြီး ဆီးခုံ အပေါ်ပိုင်းခြင်း ကပ်ကာ လီးကို ဖင်ကြွပြီး ဆောင့်ရင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း လိုးလိုက်၏ ။
” ဖွတ် ပလွတ်..” ” ဖွတ် ပလွတ် ..” ( ၁၅ )ချက်လောက် ခပ်ကြမ်းကြမ်း လိုးပြီးသည်နှင့် မိုးမြင့်ရှိန်သည် သူ၏ လီးကြီးကို သန်းနု၏ စောက်ပတ်ထဲမှ ဒစ်ကြီးနားထိ ပြန်ကာ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး လီးကြီးကို အကုန် မချွတ်ဘဲ စောက်ပတ်ထဲသို့လည်း ပြန်ထိုးမသွင်းတော့ဘဲ ရပ်ကာ ထားလိုက်၏ ။ တစက္ကန့်..နှစ်စက္ကန့် သုံး စက္ကန့်….။ ” ဟင့် ….ကို…ဘာ….ဘာ…ဖြစ်တာလဲ …ဟင့်ဟင့်…..” ” ကို လိုးတာ သန်းနု မကောင်းဘူး ထင်လို့ဆက်မလိုးတော့ဘူးလားလို့…” ” ဟင့်…ကိုရယ်…ကျွတ်…အနိုင်မကျင့်နဲ့ကွာ…” သန်းနုက ညည်းတွားရင်းက သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေး ကို လှုပ်လှုပ်ရွရွလေး လုပ်ကာ သူမ၏ ခါးလေးကို ကော့လျှက် သူမ၏ အရည်များ ရွှဲရွှဲစိုကာ ထွက်ကျနေသော စောက်ပတ်လေးကို မိုးးမြင့်ရှိန်၏ လီးတန်ကြီး အရင်းသို့ တိုးကပ်ကာ ပေးလာ၏ ။ ” ဒါဆို ကိုလိုးတာ ကောင်းလားဟင်..” ” အင်းပါ..ကောင်းပါတယ် …” ” ဘာကောင်းတာလဲဟင်…” ” အာ..ကျွတ်…ကိုကလဲကွာ…” သန်းနုက ပြောလဲပြော သူမ၏ လက်ကလေးတဖက်ဖြင့်လည်း မိုးမြင့်ရှိန်ရဲ့ ခါးကို လှမ်းပြီး ဆွဲလာ၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန်က သန်းနု၏ စောက်ပတ်ဝလေးကို သူ၏ လီးကြီး ထိပ်ဖူးဖြင့် ညှောင့်ကာ ညှောင့်ကာ လှုပ်ရှားကာ လိုးပေးလိုက်၏ ။ ” ကဲ..ပြောလေ..သန်းနု ..ရ..” ” ဘာ..ကျွတ်..ဟင့်..ဒီမှာက သေတော့မယ်…ဟင့်..ဟင့်…ဟို ..ကို..ကို…လိုးတာ …ကောင်း..ကောင်းတယ်..ဟင့်…” သန်းနု၏ စကားလည်း ဆုံးရော မိုးမြင့်ရှိန်သည် သူ၏ လီးကြီးကို ဗြုံးကနဲ ဆောင့်ကာ သန်းနု၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်တော့၏ ။ ပြီးတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆက်ကာ ဆောင့်ပြီး လိုးတော့၏ ။ မိုးမြင့်ရှိန်သည် သန်းနုကို ဆောင့်လိုးနေရာမှ အလိုးမပျက်စေဘဲ ဆောင့်ကြောင့် ပြင်ပြီး ထိုင်ိုက်ရာ အခိုက်အတန့်လေးမှာ ဆောင့်အား နဲနဲ လျော့လို့သွား၏ ။ ဖွတ်..ပလွတ်..ဖွတ် ပလွတ် …. ” အ…ဆောင့်…ဆောင့်စမ်းပါ…ကိုရယ်…အ….အင်း….ဟင်း..ဟင်း…” ဖွတ် ပလွတ်…ဖွတ် ပလွတ် …. မိုးမြင့်ရှိန်က ဆောင့်ကြောင့်ပြင်ပြီး ထိုင်ပြီးသည်နှင့် သူ၏ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သန်းနု၏ နို့လေးများကို လှမ်းလို့ ဆွဲကိုင်ကာ ဆုပ်နယ် ဖျစ်ညှစ်ပေးရင်း လိုးနေ၏ ။
မိုးမြင့်ရှိန်၏ လက်များသည် သူမ၏ နို့သီးခေါင်းလေးများကိုပါ လက်ညှိုး လက်မတို့ဖြင့် ပွတ်သပ် ချေမွကာ ပေးနေ၏ ။ ဖွတ် ပလွတ်..ဖွတ် ပလွတ် ….. ဖွတ်ပလွတ်…ဖွတ် ပလွတ် …… ” အ..ဟင့်…ကောင်း..ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ် ….အမလေး…နော် …” ဖွတ် ပလွတ်…ဖွတ် ပလွတ် ….. သန်းနုသည် ချစ်ရသူ ချစ်သူ ရင်မောင်၏ အိပ်ယာထက် ၀ယ် သူမ၏ ယင်ဖိုပင် မသန်းဖူးသော ကိုယ်လုံးလေးကို အ၀တ်အစားများ အားလုံး ချွတ်လျက် သူမ၏ ဖြူဖြူ ဖွေးဖွေး တပ်မက်ဖွယ် ကိုယ်လုံးလေးဖြင့် အသစ်စက်စက် နီတာရဲ စောက်ပတ်လေးကို ကော့ကာ ကော့ကာ ပေးရင်း မိုးမြင့်ရှိန်၏ အလိုးကို ကော့ပျံကာ အလိုးခံနေရင်းက သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲတွင် အရသာများ မွှန်ထူ လာကာ မချိမဆန့် ဖြစ်လို့ လာရ၏ ။ ထို့အတူ မိုးမြင့်ရှိန်၏ လီးကြီးသည်လည်း ဆောင့်ကာ လိုးရင်းက အရသာများ ရှိလွန်းမက ရှိလာပြီး အားမလို အားမရ ဖြစ်လာလို့သန်းနု၏ နို့လေးနှစ်လုံးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆွဲကိုင်ကာ အားကုန် ဆောင့်လိုးတော့၏ ။ အင့်..ဟင့်…အ…အ….အား…အ….အမ…လေး….ကို…ကိုရယ်…..အင်း…ဟင်း…ဟင်း….” ဖွတ် ပလွတ်..ဖွတ် ပလွတ် ….. ” ကျွတ်..သန်းနုရယ် …အ…အင်း..ဟင်း…ဟင်း….အီး…” ကာမ အထွဋ်အထိပ် သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သော သူတို့နှစ်ဦး၏ ၀တ်လစ်စလစ် ခန္ဓာကိုယ် နှစ်ခုကတော့ တသိမ့်သိမ့် တငြိမ့်ငြိမ့် သိမ့်သိမ့်သခါကာ တွန့်လိန် ကော့ပျံလျက် ရှိကြပေတော့သည်……ပြီး ။